अप्ठ्यारो अवस्थामा देउवाको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ : प्रकाशशरण महत (भिडियो) | नेपालन्युज
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको विधानले निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरेकाले पार्टीमा योगदान गरेका र चाहाना राख्ने जो कोही पनि चुनावी प्रतिपर्धामा आउन सक्ने बताएका छन्। उनले वडादेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन प्रणालीका कारण धेरैलाई प्रतिष्पर्धामा जाने बाटो खोलेको भन्दै उनले योग्य र सक्षम उम्मेदबार आकांक्षीका रुपमा अघि आउन सक्ने बताए।
विधानले दोस्रो पुस्तालाई अगाडि आउन नरोकेको भन्दै उनले पुर्खाको योगदान वा पुर्खौली विरासतको आधारमा नभई पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा उम्मेदवारी चयन गर्न सबैलाई आग्रह गरे। पार्टीभित्रका तीन पुत्र नेताहरुको भेटघाटलाई लक्षित गर्दे उनले पिताले गरेको योगदानको ब्याज खान पार्नुपर्छभन्दा पनि योगदानको आधारमा स्थापीत हुनुपर्ने दाबी गरे। उनले आफू सभापति पदका लागि पनि योग्य रहेको भए पनि उपसभापति या महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने बताए।
डाक्टर महतसँग महाधिवेशनको तयारी, आगामी नेतृत्व र उम्मेदवारीबारे गरिएको कुराकानी पढ्नुस्:
नेतृत्वलाई लिएर आकांक्षीहरु धेरै छन् । पार्टीको राजनीतिमा निरन्तर नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरु र नयाँ आकांक्षीहरु पनि देखिएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ?
पार्टीको विधानले कोषाध्यक्ष बाहेक अधिकांश पदमा निर्वाचनको व्यवस्था छ । पालिकाको वडा देखि केन्द्रसम्म निर्वाचन हुन्छ । यसले धेरैलाई प्रतिष्पर्धामा जाने बाटो खोलेको छ । यसले आकांक्षी र उम्मेदवारलाई बढाउँछ । यसबाट पहिलो पिंढी रामचन्द्र दाइ, शेर बहादुर दाइ संगै हामी पनि उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौ । यसले सबै पदहरुमा उम्मेदबार हुने संख्या बढ्यो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले आफै व्यवस्थापन गर्छ । अर्को व्यवस्थापन भनेको को व्यक्ति कोसंग प्रतिष्पर्धा गर्छ, निर्वाचनमा आन्तरिक रुपमा कसलाई कहाँ मिलाउने भन्ने हुनसक्छ तर को निर्वाचित हुने विषय त निर्वाचनले नै व्यवस्था गर्छ । यसमा चुनौति पनि छ अवसर पनि छ । त्यसैले सबैको व्यवस्थापन निर्वाचनले गर्छ । जहाँसम्म सभापतिको उम्मेदवारको कुरा हो हामीलाई पनि लाग्छ पार्टीमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छौं । यसको बाबजुद राजनैतिक नेतृत्व भन्ने विषय बोलेर मात्रै पुग्दैन । पार्टी भित्रसम्मान दिने संस्कार पनि छ, सुझबुझ अनुभवको कुरा पनि छ, कतिपय कुरा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ । अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा हामी छौ । यसलाई बुझेर नेतृत्व दिनुपर्ने प्रमुख विषय हो । पार्टी सम्हाल्ने कुरा बाहिर देखिए जस्तो हुदैन । यसकारणले मलाई लाग्छ अनुभव र पछिल्लो अवस्थामा दिनुभएको परिपक्क नेतृत्व जो शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको छ । आलोचना टिप्पणीहरु होलान् देउवाको तर अहिलेको अप्ठेरो अवस्थामा उहाँले दिएको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने ठूलो संख्या छ ।
मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म सहमहामन्त्री भईसकेँ सबै किसिमको अनुभव छ तर सभापति दाबी गरिरहेको छैन । यस्तै अरु साथीहरुले पनि माथि दाबी गरिरहनुभएको छ जस्तै विमलेन्द्र जी पनि हुनुहुन्छ ।
यसको अर्थ रामचन्द्र पौडेल, शेर बहादुर देउवा, शंशाक कोइराला, विमलेन्द्र नीधिलाई एकै ठाउँमा लडाउने हो त ?
ल फेरि पनि शेर बहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा नै दोहोरिने हो भने तपाईहरुको राजनीतिक समय, उमेर र भविश्य ५ बर्ष पछाडि धकेलिने छ । यो बारे पनि कठोर भएर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको होइन र ?
म आफूलाई पनि नेतृत्वको लागि योग्य ठान्छु । सभापति भएर पार्टीलाई हाँक्न सक्छु भन्ने लाग्छ । अगाडि शेरबहादुर देउवाको चर्चा गरेँ, रामचन्द्र दाइ पनि वरिष्ठ र बराबर अनुभव भएको नेता हुनुहुन्छ । हाम्रो अग्रज रहनुभएका दाइहरु हुँदा हुँदै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन । यसले हामीलाई नै घाटा छ भन्ने जान्दा जान्दै पार्टीको परम्परा र संरचनाले र अनुभवले दाइहरुको सान्र्दभिकता अहिले पनि छ । हो, यो हामीले बुझेका छौ । हामी केही बर्ष पछि धकेलिनेछौ तर हामी त्यो दाबी गरिरहेका छैनौ । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म सहमहामन्त्री भईसकेँ सबै किसिमको अनुभव छ तर सभापति दाबी गरिरहेको छैन । यस्तै अरु साथीहरुले पनि माथि दाबी गरिरहनुभएको छ जस्तै विमलेन्द्र जी पनि हुनुहुन्छ । निर्वाचनको समय आईसकेपछि कतिपय बन्छु भनेका हरु फेरी नबन्ने दाउमा पुग्नुहोला । कतिपय उम्मदवारी नै नदिएका साथीहरु नै अगाडि सर्नुहोला । त्यसकारण अहिलेनै यस्तो भईसक्यो भन्ने अवस्था आईसकेको छैन ।
पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा रहेको प्रसंग ३ शिर्ष नेताका सुपुत्रहरु संयोगले सबैको पार्टी भित्र अलग अलग योगदान छ । यसलाई बंश वा नाताले जोड्नुपर्दैन । तीनै जनाको घरमा लञ्च मिटिङ्ग भयो यसले नयाँ गुट जन्मायो कि भन्ने छ । पार्टी भित्र दुई समुह अहिले पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म सहमहामन्त्री भन्दा माथि महामन्त्री अथवा उपसभापति पदमा लड्छु । यसको औपचारिक घोषणा केही समयपछि गर्छु ।
लामो समय शेरबहादुर देउवालाई आड, भरोसा, विश्वास, नेतृत्व सहयोग सबै गर्नुभएका विमलेन्द्र नीधि सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भनेर देउवा समुहबाट बाहिरीनुभएको छ । संस्थापन पक्षलाई यसले असर गर्छ । यसको मुल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
यी कुराहरु भइसकेको छ । यी कुरा नभई म यसरी बोल्ने थिईनँ । त्यो राम्रो पनि हुदैन । हामी संस्कार अगाल्छौ । उत्ताउलो भएर राजनीति कहिलेही गरेनौँ । यस विषयमा छलफल भएको छ । तर औपचारीक रुपमा घोषणा कसैको पनि नभएको अवस्थामा मैले पनि नगरेको हो । तर म सहमहामन्त्री भन्दा माथि महामन्त्री अथवा उपसभापति पदमा लड्छु । यसको औपचारिक घोषणा केही समयपछि गर्छु ।